Korintofo II 3 NA-TWI - Mo gyidi boa asɛnka no - Eyi kyerɛ - Bible Gateway
Korintofo II 2Korintofo II 4
Korintofo II 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 Eyi kyerɛ sɛ yɛrehoahoa yɛn ho bio anaa? Nkrataa a edi adanse pa a efi yɛn nkyɛn anaasɛ ɛreba mo nkyɛn no ho hia yɛn sɛnea ebi ho hia nnipa afoforo bi no. 2 Mo ankasa moyɛ krataa a ɛwɔ yɛn nkyɛn a wɔakyerɛw wɔ yɛn koma mu sɛnea ɛbɛyɛ a obiara behu na wakan. 3 Ɛyɛ nokware sɛ Kristo no ankasa na ɔkyerɛw saa krataa yi ɛnna ɔde somaa yɛn. Ɛnyɛ kyerɛwduru na wɔde kyerɛw no ɔbo pon so na mmom Onyankopɔn a ɔte ase no Honhom na wɔde kyerɛw guu nnipa koma mu.